सडक पुर्‍याउन विद्रोह !
मंगलबार, असार २३, २०७७
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएको एउटा गाउँ अर्थात वीरेन्द्रनगर-९ को सत्यकाँडा । बजारदेखि मात्र चार घण्टा टाढाको दुरी । तर पनि आजसम्म सडकको पहुच थिएन ।
त्यसपछि सत्यकाँडा र अलायचौरका स्थानीयले एउटा विद्रोह रोजे । विद्रोहपछि दुई महिनामै गाउँमा सडक पुगेको छ । 'गत चैतमा हामीले सरकारसँग विद्रोह गर्ने निर्णय गरौं', अलायचौरका नरबहादुर गुरुङ भन्छन्, 'अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्दो रहेछ हामीले पनि उसै गर्‍यौं ।'
अलायचौर-सत्यकाँडा-बुलबुले सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङ थप्छन् 'तीन वटा सामुदायिक वन, स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनसँग लड्न तयार भएपछि मात्रै गाउँसम्म ट्र्याक खोलिएको हो ।'
गाउँमा सडक पुर्‍याउन संघर्ष गरेका स्थानीयले भने स्तरोन्नतिका लागि सरकारसँग अर्को विद्रोहको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । 'पहिले गाउँमा कोही बिरामी पर्दा स्टेचर बोक्ने बाटो नभएर डोकोमा बोक्नुपथ्र्यो', अर्का स्थानीय गौरी गिरी भन्छिन्, 'विद्रोह गरे ट्र्याक खुल्यो अब गाउँमा एम्बुलेन्स आउन सक्ने राम्रो सडक बनाउनु छ ।'
त्यस्तै सडक नहुँदाका दुःख सम्झँदै अलायचौरकी रत्नलक्ष्मी सलामी भन्छिन्, 'अब पनि डोकोमा बिरामी बोक्नु नपरोस्, चाहिएका बेला एम्बुलेन्स र नियमित गाडी गुड्ने सडक बनोस् ।' वर्षौंपछि ट्र्याक खुले पनि यसको स्तरोन्नतिमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सलामी बताउँछिन् ।
सडक पुगेसँगै गाउँको विकास निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सामाजिक अगुवा बताउँछन् । 'पहिले गाउँमा ४०/४५ घरधुरी थिए तर सडक, पानी, बत्ती नहुँदा गाउँ नै रित्तियो', सामाजिक अगुवा अमृत बिसी भन्छन्, 'आधा गाउँ दसवर्षे जनयुद्धमै बसाइँ सर्‍यो, असुविधाकै कारण बाँकीले बिस्तारै गाउँ छोडे ।'
ट्र्याक खुलेसँगै गाउँको उत्पादनले बजार पाउने र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन हुने अर्का सामाजिक अगुवा ऋषि गिरी बताउँछन् । 'पहिले स्टेचर बोक्ने बाटो थिएन अव एम्बुलेन्स आउला', उनी भन्छन्, 'एकातिर गाउँको उत्पादनले बजार पाउँछ भने अर्कोतिर नागरिकको जीवनस्तर माथि उठ्नेछ ।' गाउँसम्म गाडी पुगेसँगै अलायचौरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । 'वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका र सामुदायिक वनसँग विद्रोह गर्दै ट्र्याक खुल्यो ।'
जनप्रतिनिधिहरुले भने अलायचौर र सत्यकाँडावासीको जीवनस्तर उकास्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने आश्वासन दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद यामलाल कँडेल भन्छन्, 'जनताको सक्रियताले गाउँसम्म सडक पुगेको छ । अब यसको संरक्षणमा सबैले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । जनताको संलग्नतामा मात्रै विकास निर्माण सम्भव रहेको उनले बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले पनि सत्यकाँडामा ट्र्याक खुलेसँगै त्यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताइन् । 'सडक स्तरोन्नति गर्न सकियो भने बुलबुले र काँक्रेविहारमा आउने पर्यटकलाई सत्यकाँडामा ल्याउन सकिन्छ', ढकाल भन्छिन्, 'प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको सत्यकाँडालाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।'
वीरेन्द्रनगर-९ का वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरले निर्वाचित भएको दुई वर्षपछि चुनावी बाचा पूरा गरेको बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ५ लाख र वडा नं. ९ को एक लाख गरी जम्मा ६ को लागतमा अलायचौर-सत्यकाँडा-बुलबुलेसम्म ५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको हो ।